Xalka ah Recovery OCZ Votex SSD
> Resource > Ladnaansho > Xalka ee OCZ Votex SSD Recovery
Ma u baahan tahay in ay dib u soo ceshano Xogta laga My OCZ Vertex SSD
Sidaas daraaddeed waxaan soo amaahday aan OCZ Vertex SSD in saaxiibkay oo uu formatted SSD ah. Nasiib darro sawirada qaar ka mid ah aan ku jiray safarkiisii ​​dhawaa ee Burma, oo aanan mar u leeyihiin in ay gurmad on my computer, ayaa lagu soo formatted. Fikrad kasta oo sida aan soo kaban karto, xogta laga OCZ Votex SSD? Your gargaar la aad ayay ugu qanacsan doonaa.
Halkan waa soo jeedin, haddii aadan dib-u-isticmaali aad OCZ Votex SSD, suurto gal ah lagaa dib photos waa ku weyn yahay. Maxaa yeelay, sawiro formatted ayaa weli ku jira gudaha SSD, waxaad kaliya oo aan iyaga ka heli karaan. Sidaas, joojin adiga oo isticmaaleya isticmaale SSD iyo caawinaad ka heli barnaamij soo kabashada OCZ Votex SSD. Tusaale ahaan: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani waxay la yaab leh OCZ Votex SSD software kabashada xogta waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee files ka OCZ Votex SSD, oo ay ku jiraan document, sawiro, archives, videos, files audio, iwm Intaa waxaa dheer, waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka ka hor iibsigu nooca buuxda. Version maxkamad kuu oggolaanayaa in aad baarista OCZ Votex SDD in lagu hubiyo sida badan files waxa aad awoodi kartaa in ay dib u soo ceshano.
Hel version jirrabaadda kuwa aan Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka OCZ Votex SSD hadda!
Qabtaan OCZ Votex SSD Recovery in 3 Talaabooyinka
Ka hor inta aanan bilaabin in aan dib u soo kabashada, fadlan hubi in aad OCZ Votex SSD waxaa laga garan karaa sida drive adag on your computer.
Tallaabada 1 Select Ladnaansho Mode dib u soo ceshano Xogta laga OCZ Votex SSD
Orod Wondershare Data Recovery, oo aad arki doonaa suuqa kala bilaabatay 3 hababka soo kabashada iyo "furmaya Recovery" doorasho.
Si aad u soo kabsado laga badiyay, tirtiray ama formatted files ka OCZ Votex SSD, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode si ay u bilaabaan.
Fiiro gaar ah: The "furmaya Recovery" doorasho waa in aad soo dhoofsadaan natiijada badbaadiyey scan in dib loo bilaabo kulan kabashada hore.
Tallaabada 2 baarista OCZ Votex SSD
Halkan barnaamijka waxaa baadhista iyo soo bandhigeen drives on your computer adag, oo ay ku jiraan aad OCZ Votex SSD. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ah oo guji "Start Scan" in la raadiyo xog lumay.
Tallaabada 3 ka OCZ Votex SSD Ladnaansho Data sida aad rabto
Scan ka dib, Wondershare Dr.Fone muujin doonaa dhammaan waxyaabaha laga helay qaybaha, sida aad ka arki kartaa image hoose.
Halkan waxaa ku qoran in aad awoodid in aad u aragto magacyada file si aad u hubiso in aad u doonayay files ayaa laga helay ama ma; iyo sawirada, xitaa waxaad iyaga ku eegaan karo, ka hor soo kabashada.
Ugu dambeyntii, aad sax karo files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" si ay u soo celiyaan. Fadlan dooro meel on your computer ama qalab lagu kaydiyo kale oo aad xajisaan files recoverable.
Western Digital Data Recovery: Sida loo Soo Celinta Faylal ay ku WD Hard Disk Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB la Recovery USB
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Files ka dib markii System Soo Celinta
Ceeriin Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado ceeriin Photos ka Camera Digital
2 siyaabo inuu ka soo kabsado card SD ee pc / Mac si fudud oo dhaqso
Top 5 Softwares u soo kabashada xogta Linux
Memorex Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Device Memorex Kaydinta
Siduu u Fantom External Hard Drive Data Recovery
Siduu u AcomData Hard Drive Data Recovery
Nexus 4 Data Ladnaansho: Ladnaansho Nexus 4 Khasaaray ama Photos tirtiray iyo Videos